I-OTA-13 iya kuphucula ukuhambelana nePinePhone kunye nePineTab | Ubunlog
I-OTA-13 iya kuphucula ukuhambelana nePinePhone kunye nePineTab
Kwinyanga ephelileyo ngoMeyi, eBports waphosa i-OTA-12 yenkqubo yokusebenza kwebala eyakhulayo, kunye nenoveli ephambili yokuba ukugqitywa ukusuka kwi-Unity8 ukuya eLomiri kwagqitywa. Okwangoku, inkampani ethathe i-Ubuntu Touch xa i-Canonical ishiye isebenza kwi I-OTA-13, Inguqu esele ikho kuphuhliso eya kuza neendaba ezibalulekileyo kuluntu lwe-PINE64: iprojekthi ijolise ekwenzeni inkqubo yokusebenza isebenze ngcono kwiPinePhone kunye nePineTab.
Njengoko kuchaziwe kwi- Ubuntu Chukumisa i-Q & A 82, I-UBports OTA-13 iya kuphucula ukusebenza kulwakhiwo lwamva lweChromium, yongeza ukhuseleko kunye nezinye izinto. Kwelinye icala, isasebenza ukuhlaziya kwi-Qt 5.12, kodwa ezona zinto zibalaseleyo ziindaba zoluntu lwasePINE64. Kwaye, ngokwembonakalo yayo, zombini iPinePhone kunye nePineTab ibe yeyona nto ithengiswayo kwaye kungekudala yaphelelwa sisitokhwe.
Yintoni entsha kwi-OTA-13 yezixhobo ze-PINE64
I-OpenGL enika inkxaso kwiPinePhone. Okwangoku Ubuntu Bamba kolu hlahlo lwabiwo-mali luvela ku-Allwinner usebenzisa isoftware yokukhawulezisa, eyenza kakuhle, kodwa ngoku iya kuba nesinikezeli se-OpenGL esisebenzayo kunye nohlobo olulandelayo.
Umfanekiso wokuqala wefektri ugqityelwe i-Ubuntu Touch kwitafile yePineTab. Lo mfanekiso ujongano lomsebenzisi olusebenzayo kwaye lusebenza kakuhle kwimowudi yethebhulethi, kodwa ezinye izinto zisasebenza.
Ngoku kukho inkxaso yekhamera esebenzayo yePinePhone, kodwa isacotha kakhulu kwaye ineminye imiqobo, njengokukhawulelwa kwimowudi ye-2.1MP okwangoku.
Kulungiswe utshintsho lweBluetooth lwePinePhone.
I-PINE64 ikwakhankanya ukuba benza inkqubela phambili kwi-Anbox, isoftware evumela ukuqhuba ii -apps ze-Android kwiLinux, into ethi ngokwembono yalo mhleli ibaluleke kakhulu. Ubuntu Bamba i-OTA-13 awukabikho umhla wokukhutshwa ocwangcisiweyo okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » I-OTA-13 iya kuphucula ukuhambelana nePinePhone kunye nePineTab
NewsFlash, umfundi we-RSS ujonge ukuphumelela i-FeedReader
Khangela imitya okanye iipateni ngaphakathi kokubhaliweyo okucacileyo ukusuka kwisiphelo sendlela